Yintoni ifanele unakekele kwi-emidlalo?-Diabetes Ithetha-Sinocare
Yintoni esifanele siyijonge kwimidlalo?
Ixesha: 2019-11-12 hits: 45
Ngaphambi kokuqala kokuzilolonga, kufuneka benze uvavanyo lomzimba olubanzi. Umxholo wovavanyo ubandakanya: uxinzelelo lwegazi, i-lipid yegazi, i-glycosylated hemoglobin, umsebenzi wentliziyo, umsebenzi wezintso, umsebenzi wezintso, wengxowa mali kunye nonyawo lweenyawo njalo njalo. Ugqirha uya kulungiselela unyango olusengqiqweni ngokomzimba wakho.
Sela ngexesha amanzi. Xa ixesha lokuzivocavoca lithatha iyure ye-1, kufuneka unake amanzi okusela. Kungcono ukusela okuncinci amaxesha amaninzi. Ukuba ixesha lokuhamba elindelekileyo lifumana iyure ye-1, kungcono ukusela ngaphambi kwexesha ukuphepha iziphumo ezibi emzimbeni womntu emva kokuphelelwa ngumzimba. Ukuba uzilolonge ngaphezulu kweeyure ze-2, kufuneka uthathele ingqalelo ukuqhuba isidlo esongezelelweyo.
Nxiba iimpahla ezifanelekileyo, izihlangu kunye neesokisi. Kuya kufuneka banxibe iimpahla eziphefumlayo ebusika, ezinceda umzimba ukuba ubhukule kwaye uthintele ukubanda. Xa imozulu ibanda kakhulu, kuyacetyiswa ukwenza imidlalo yangaphandle. Nxiba izihlangu ezahlukeneyo ukwenza imidlalo eyahlukeneyo, njengokunxiba izihlangu zomdaniso xa udanisa, unxiba izihlangu ezibalekayo xa ubaleka, unxiba izihlangu zokuhamba xa unyuka intaba, njalo njalo. Xa izihlangu zingalunganga okanye zingaziva zingakhululekanga, kufuneka zithathelwe indawo ngokukhawuleza. Iisokisi mazikhethwe ngombala okhanyayo (omhlophe) kwaye ube nesithukuthezi esihle. Emva kokuzilolonga, jonga iinyawo zakho ukuba ngaba zinento ebomvu ebomvu, ukudumba, ubushushu kunye nentlungu. ukuba kunjalo, kufuneka ujongane nabo ngexesha elifanelekileyo.
Kufuneka bomeleze ukubekwa esweni kweglucose ngaphambi nasemva kokuzilolonga. Xa usenza umthambo kakhulu okanye uthambe kakhulu, abaguli kufuneka balungelelanise okwethutyana inkqubo yokutya kunye neyonyango, ukuze baphephe i-hypoglycemia.
Khusela i-hypoglycemia. Ngexesha lokuzivocavoca, izihlunu ziya kudla iglucose emzimbeni. Kwangelo xesha, ukuziva kwe-insulin kuya kuphucula. Indima edibeneyo iya kukhokelela ekunciphiseni i-glucose yegazi emva kokuzilolonga. I-Hypoglycemia inokwenzeka kwiiyure ze-2 ~ 12 emva kokuhamba, kwanakwiiyure ze-24. Ngaphezulu kokuqina koqheliselo, lixesha elide; Okuninzi kwenzeka kwi-hypoglycemia, the
Uqala nini ukwenza umthambo kwaye ixesha elingakanani. Sicebisa ukuba isifo seswekile kufuneka senze umthambo emva kweeyure ze-1 zesidlo kunye nokuphepha incasa yeziyobisi. Ukuba ufuna ukwenza umthambo, kufuneka unciphise idosi yeyeza. Ixesha lokuzivocavoca, umthambo we-aerobic kufuneka ubuncinci imizuzu ye-30 ixesha ngalinye, ixesha lokuzivocavoca lifikelela ubuncinci kwimizuzu ye-150 ngeveki. Uqeqesho lwamandla luthatha imizuzu ye-10 ~ 15 ngexesha ngalinye, ubuncinci amaxesha e-3 ngeveki; Ukuziqhelanisa nobuthathaka kufuneka uthathe imizuzu ye-5 ～ ye-10 ngalo lonke ixesha.
Iphepha elidlulileyo: Ten Most Common Reasons for Fluctuation of Blood Glucose Level
Iphepha elilandelayo: Yintoni oza kuyitya xa uhlaselwa yi-hypoglycemia?